Bhuku raZvakazarurwa 15:1-8
Ngirozi nomwe dzine matambudziko manomwe (1-8)
Rwiyo rwaMozisi nerwiyo rweGwayana (3, 4)
15 Zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga, chikuru uye chinoshamisa; ndakaona ngirozi nomwe+ dziine matambudziko manomwe. Aya ndiwo ekupedzisira, nekuti ndiwo achaita kuti kutsamwa kwaMwari kupere.+ 2 Ndakaona chaiita segungwa regirazi+ rakasangana nemoto, uye vaya vanokunda+ chikara nemufananidzo wacho+ nenhamba yezita racho+ vakanga vakamira pedyo negungwa regirazi, vakabata udimbwa hwaMwari. 3 Vaiimba rwiyo rwaMozisi+ muranda waMwari nerwiyo rweGwayana,+ vachiti: “Jehovha* Mwari Wemasimbaose,+ mabasa enyu makuru uye anoshamisa.+ Nzira dzenyu dzakarurama uye ndedzechokwadi,+ imi Mambo asingagumi.+ 4 Chokwadi ndiani asingazokutyii uye asingazokudzi zita renyu, imi Jehovha,* nekuti ndimi mega makavimbika?+ Marudzi ese achauya kuzokunamatai,+ nekuti akaziviswa mirayiro yenyu yakarurama.” 5 Pashure peizvi ndakatarisa ndikaona nzvimbo tsvene yetende reuchapupu+ ichivhurwa kudenga,+ 6 uye ngirozi nomwe dzaiva nematambudziko manomwe+ dzakabuda munzvimbo tsvene, dzakapfeka nguo dzejira dzakachena uye dzaipenya uye dzainge dzakasunga mabhandi egoridhe pazvipfuva zvadzo. 7 Chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chakapa ngirozi dzacho nomwe ndiro nomwe dzegoridhe dzakanga dzizere nekutsamwa kwaMwari,+ uyo anorarama nariini nariini. 8 Nzvimbo tsvene yakabva yazara neutsi nekuda kwekubwinya kwaMwari+ uye simba rake, uye hapana akakwanisa kupinda munzvimbo tsvene kusvikira matambudziko manomwe+ engirozi dzacho nomwe apera.